The Irrawaddy's Blog: ၁၀ တန်း အောင်စာရင်း အွန်လိုင်းက ကြည့်ကြမယ် skip to main |
၁၀ တန်း အောင်စာရင်း အွန်လိုင်းက ကြည့်ကြမယ် Friday, June 7, 2013
၂၀၁၂ စာသင်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ( ဆယ်တန်း) ဖြေဆိုထားသူများနဲ့ ကျောင်းသား မိဘတွေ အနေနဲ့ အောင်စာရင်းကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်လို့ ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် ထွက်မယ့် အောင်စာရင်းကို ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ် ဦးစီးဌာနကနေ ( http://moemyanmar.net/education/result-search-2012.php ) အင်တာနက်လိပ်စာကို သွားပြီး မိမိရဲ့ စာစစ်ဌာနနဲ့ ခုံနံပတ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အောင်စာရင်းကို ကြည့်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာကို နှိပ်၍ သွားကြည့်ပါ။ "ဖြေဆိုသူ၏ စာစစ်ဌာနသင်္ကေတနှင့် ခုံအမှတ်ကို မြန်မာဘာသာ(Zawgyi-One Font, Myanmar2 Font, Myanmar3 Font)ဖြင့် ရိုက်ထည့်ပါ"
ယခုနှစ်မှ စတင်လိုက်တဲ့ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း အွန်လိုင်း မှ ကြည့်နိုင်တဲ့ စနစ်ကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ အချိန်မကုန်ပဲ၊ လူမပင်ပန်းပဲ မနက်အစောကြီး တန်းစီ ကြည့်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေက ကင်းဝေးသွားမှာဖြစ်လို့ အကြိုက်တွေ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ အောင်စာရင်း သိလိုသူတွေအတွက် အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကောင်းဖို့ ဆုတောင်းထားကြမှ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အိမ့်သံစဉ် ~ Posted in:
အခုတင်ထားတဲ့10 တန်အောင်စားရင်ကဘယ်နှယ်ခုနစ်ကလဲမသိဘူး အခုရှာတာတစ်ယောက်မှလည်းမတူဘူး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘယ်အချိန်မှအမှန်ပေါ်မှာလဲ ဆိုက်ကလည်းပုံမှန်မကျဘူးကျော်ခွပြီးကြည့်နေရတယ်
ကြည့်လို့လဲမရဘူး .. အဲ့ဆိုက်ဒ် က ၀င်လို့ကိုမရတာ .. suenge
I can't check it because it showed me (This Domain isPARKED.)could u help me.Please..........
စမ်းကြည့်တာ အဆင်မပြေဘူး ... တစ်ခုခု လွဲမှားနေတယ် ထင်တယ်...ခုံနံပါတ်နဲ့ နာမည်တွေနဲ့ မကိုက်ဘူးလို့ ပြောသံတွေ ကြားနေရတယ်...
The website cannot be found to check exam result. Do not just pretend as if you can do everything other people have been doing. Confess that you cannot do yet. Anonymous
အခုထိ June8 2013မှာထွက်​တဲ့​အောင်​စာရင်းresultကြည့်​လို့မရ​သေးဘူးရှင်​
This is Myanmar. That is Myanmar.
ဘာလဲဟာ စိတ်ပျက်ထှာ ကြည့်လို့လဲရဘူး
Pyone Kay Khaing
စကပ၁၀၁၃ကိုသိချင်တယ် ဘယ်မှာရှာရမလဲရှင့် လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး
$ ta lwl yee pl .. Not available dt Phyu Hnin
2012 result ကြည့်​လို့ရဘူး
အဲ side ကိုသွားမရဘူး လုပ်​ပါအုံး Hein Zaw Aung
web page ဖွင့်ထားပြီး information တွေ up to date မလုပ်နိုင်ရင် အလကားပဲ၊ အခုထိ 2013 အောင်စာရင်းတောင်ကြည့်လို့မရသေးဘူး
nan aye aye soe
လုံးဝဝင်လို့မရဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ Anonymous
inn ဘယ်လိုမှဝင်လို့မရဘူး မဖွင့်သေးလို့လား
ကြည့်လို့မရဘုး သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ကြည့်ပေးချင်တာ အဆင်မပြေဘူး realtimber real
လဥပဲ ဘာမှ ကြည့်လို့မရဖူး
လဥပဲ ဘာမှ မရဖူး
AC Yae Chan
What the hell is wrong with this website It found nothing မေ လေး
ဖပ -၁၀၂၉ကြည့်ပေးပါ့ မကွေးတိုင်းပါ
I cannot enter the mentioned website. What the hell?
I hope this is notalie. You have legally announced that the results can be found on the internet but it doesnt even work. mahar thawe
2014 က ဟာပဲရတယ်​ အခုလတ်​ရှိ2015 အတွက်​ဘယ်​လိုမှကြည့်​လို့မရဘူး​ပြောရင်​သာ အစိုးရက အကြီးကြီး​တွေ​ပြောတာ လုပ်​ရင်​ ​စောက်​တလွဲပဲ Mr. King
screen short ​တောင်​ ၂၀၁၂ က ဟာကြီး